Izixhumanisi zokuhamba ezihamba phambili eziya eNottingham naseDerby!
Stapleford Nottingham, England, i-United Kingdom
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Michele
Le ndlu yedolobha ehlotshiswe kahle itholakala endaweni enhle yokuhamba ngezinyawo. Itholakala nje imizuzu emi-5 ukusuka e-J25 ye-M1 futhi imizuzu emi-3 kuphela uhamba usuka esikhumulweni sesitimela / Ipaki kanye ne-Ride engena ngqo e-Nottm futhi ime esibhedlela i-QMC, esiteshini sesitimela i-Nottm kanye ne-Motorpoint Arena. Imizuzu engama-20 kuphela ukusuka ku-EMA futhi ibekwe kahle kakhulu kuwo womabili amanyuvesi e-Nottm naseDerby. Kunenqwaba yamabha nezindawo zokudlela eziseduze okuhlanganisa isiNtaliyane, isiShayina nesiNdiya kanye nazo zonke izitolo ezinkulu.
Le ndlu isanda kulungiswa ngokugcwele futhi yonke ifenisha, imibhede kanye nezingubo zokulala zintsha sha ngoNovemba 2021. Womabili amakamelo okulala anemibhede engu-2 yabantu abangabodwana elungele wonke umuntu ohambela umsebenzi, imindeni nabangane ngempelasonto ungekho. Sine-Freeview TV/DVD ene-USB ne-WiFi yamahhala. Kukhona ikhishi elihlome kahle lalabo abathanda ukupheka kanye nendawo yokudlela ehlalisa abantu abangu-4 ngokukhululeka. Igumbi lokulala elikhulu linohambo olukhulu ekhabetheni kanye nama-hangers amaningi ngakho kunendawo enkulu yokugcina uma uvakashele isikhashana. Ngaphandle kunompheme olungiswayo okwamanje, onetafula nezihlalo kanye nesisenge. Kugcwele indawo yokupaka emgwaqweni ngaphandle kwendlu.
4.87 ·94 okushiwo abanye
4.87 · 94 okushiwo abanye
Phakathi nebanga lokuhamba kukhona izitolo ezinkulu, amabha kanye nezindawo zokudlela. Uma ufuna ukungena enkabeni yedolobha lase-Nottingham khona-ke ithilamu iyindlela okufanele uhambe ngayo! Ukuhamba ibangana nje kuzokuyisa edolobheni lapho unempilo yasebusuku emangalisayo, amatiyetha kanye ne-Motorpoint Arena okuyindawo enkulu yekhonsathi.
Eduze kakhulu igalaji likaphethiloli nesuphamakethe encane ene-cashpoint ewusizo kakhulu uma uphelelwa yilutho.
Ekhaya ngiyazihlolela kodwa angifonelwanga nje. Ikhodi yokhiye izothunyelwa kuwe ekuseni lapho ufika.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stapleford Nottingham namaphethelo